OR I have just got out of a lorry | Refugee Info Bus
Konkolaataa meeshaa fe’u keessaa baheera, maal godhutu narra jira?
Paaspoortii ykn woraqaa seera qabeessa imalaaf gargaaru yoo hin qabne lammummaa argachuudhaaf carraan tokko ati qabdu koolugaltummaadhaaf iyyannoo galfachuudha. Kunis waan bu’aa qabuuf yeroo siif mijaayetti raawwadhu.
Jalaqabarratti abukato qabachuun yaaluun baay’ee kan barbaachisu ta’us, kan dursi kennamuu qabu iyyannoo koolugaltummaatiif. Biyya UK seentee osoo koolugaltummaadhaaf hin iyyatin turuun dhimma baqattummaa kee irratti miidha qabaachuu mala. Home Office erga biyya kana seente irraa kaastee eessa akka jiraataa turtee fi akkamitti akka jiraachaa turte irratti gaafi sitti kaasuu malu.
Konkolaata fe’umsaa keessaa akkuma buuteen, essatti akka keessaa buutee fi UK keessa nannoo kam akka jiru beekuuf carraaqi. Kanas kan gochuu dandeettu bilbila kee fayyadamtee Kaartaa irra ilaaluudha ykn nama gaafachuudhaan. Eessa akka jirtu nama karaa irratti yoo gaafatte, waa’ee kee poolisidhatti si gabaasuu danda’u.
Fakkeenyaaf akkana jettee gaafachuu dandeetta:
San booda koolugaltummaaf iyyannoo galchuudhaaf gara waajjira Home Office kan Croydon, London argamu bilbiluutu sirraa eeggama. Lakkofsi bilbilaa 020 8196 4524. Gatiin bilbilaa daqiiqaadhaan 3-55p dha. Af-gaafii duraa achitti taasisuu qabda.
Gareen af-gaafii duraa kan Croydon, dursa gara waajjira poolisii akka deemtuu sitti himuu malu. Waajjira poolisii argachuudhaaf hidhaa kanaa fayyadamaa https://www.met.police.uk/contact/af/contact-us/find-a-police-station/ ykn nama argitan gaafachuu dandeettu.
Fakkeenyaaf, akkas jettanii gaafachuu dandeettu:
Gareen tajaajilaa kennu dhufee isin fuudhe gara waajjira poolisii isin geessuu mala. San booda poolisiin erga odeeffannoo tokko tokko fudhachuudhan akkaisin af-gaafii duraa taasiftaniif gara Croydon isin erga.
Af-gaafichi hanga sa’aatii afur turuu mala. Right to Remain marsaariiti jedhamu irratti gorsa fi odeeffanno af-gaafii duraa ilaalchisee barbaachisaa ta’etu jira waan ta’eef seenuudhaan ilaalaa. https://righttoremain.org.uk/toolkit/screening/ odeeffanno afaanota garagaraan barreeffame waan jiruuf, odeeffannoo afaan ati dubbattuun argachuu malta. Af-gaafichi duraa wolitti dhufeenya fuldura Home Office wojjiin gootaaniif murteessaa waan ta’eef haalaan qalbeeffachuun barbaachisaadha.
Bakka bu’aan The Home Office irraa af-gaafii siif godhu woraqaa irratti yaadannoo ni qabata. Garagalchi afgaafichaa hedduu barbaachisaa waan ta’eef akka siif kennamu gaafadhu.
Akka nama Kolugaltummaa barbaadu tokkootti adeemsa keessatti yeroo kamittu carraan hidhamuu akka jiru beeki. Carraan hidhamuu kun kan irra aanamu danda’u yoo mirga biyya keessatti hafuu ( Right to Remain) yoo argatte qofaadha. Adeemsa koolugaltummaa keessatti iddoo carraan itti hidhamuu jirutu jira. Isaan keessaa inni tokko erga af-gaafii duraa ykn calalii jedhamu xumurteen booda. Hidhamuun duratti odeeffannoo gahaa argattee itti qophaahuudhaaf hidhaa kanarra odeeffannoo barbaachisaa ni argattu: https://righttoremain.org.uk/toolkit/detention/